အတု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » အတု
Posted by naywoon ni on May 22, 2013 in Drama, Essays.., My Dear Diary, Poetry | 13 comments
ကဗျာ အတွေး စာအရေး
ဒီအကြောင်းအရာလေးက ကဗျာတစ်ပုဒ်အဖြစ် ဖန်တီးလိုက်ရင် တော်တော်လှမှာ ……။ ဒါပေမဲ့ ကဗျာအဖြစ်ဖန်တီးလိုက်ပြီးရင် ဒီရွာထဲကို ထိုးဖောက်ဖို့ မလွယ်တာက ခက်တယ်….။ ကိုယ့်ကလည်း မြင်မြင်ကရာ ကဗျာလိုပဲ တွေးတတ်တော့လည်းခက်သား…..။ ဒီတစ်ခါတော့ ဖတ်မိသူတွေလည်း ကဗျာနဲ့ပတ်သက်လို့ တွေးလုံးလေးတွေ စကားလုံးယူပုံလေးတွေ ဘယ်လိုဖန်တီးတယ်ဆိုတာလေးတွေ ပေးရင်းနဲ့ စတိုင်တစ်မျိုးနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်…..။ စတိုင်ဆိုလို့ ကြုံတုန်းတစ်ခုပြောချင်သေးတယ်…။ ခုခေတ်စားနေတဲ့ အိုဗာ ဂန်းနားစတိုင် မဟုတ်ပါဘူး…။ ပြန်မာဆန်ဆန်လေး ဆန်ဆန်လေးပဲ ဦးသိန်စိန် -ဒေါ်စု စတိုင်လောက်လုပ်ရအောင်ပါ….။ အိုဘာမားနဲ့ ဂန်းနား အတွဲလှသလို မြန်မာတွေအတွက်ကလည်း ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်စုအတွဲက လှပါတယ်….။ သူတို့နှစ်ယောက်တွဲက ခိုင်းလိုက်ရကောင်းဘူးလား …….။ စင်ပေါ်မှာ …. ဟားဟား…..။ ပြောရင်းနဲ့ချော်တော့ငေါ့ကုန်ပါပြီဗျာ….။ ဒီအကြောင်းအရာ လေး ရေးဖြစ်ဖို့ စေ့ဆော်ပေးတဲ့ အကြောင်းလေးကနေစပြောရရင်ကောင်းမလား ….။ တစ်နေ့ နေ့လည်နေကပူပူနဲ့ ဘယ်မှမထွက်ဖြစ်ပဲ အလကားကြည့်လို့ရတဲ့ MRTV ပဲ ထိုင်ကြည့်နေဖြစ်တယ်….။ အဲဒိနေ့ခင်းက မြန်မာဇတ်ကားထိုင်ကြည့်နေရင်းနဲ့ ဇာတ်ကားမပြီးသေးဘူး သတင်းကနှစ်ခါလောက်အကြေငြာခံလိုက်ရသေး….။ ဇာတ်ကားပြီးတော့လည်း ဘာများဆက်လာဦးမလဲကြည့်လိုက်တော့ …….. လားလား နေပြည်တော်မှာတည်ဆောက်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဂါယာ ဆိုပါရောလား ….။ ပုံစံတူ တည်ဆောက်နေသတဲ့……။ ပုံစံတူတာနဲ့ တစ်ကယ်အစစ်ဖြစ်ပါရောလား……။ နေ၀န်းနီ ခေါင်းထဲ ၀င်လာတဲ့ စကားလုံးတစ်ခုက “ အတု” ဆိုတာပါပဲ…..။ အစီအစဉ်ကိုဆက်ကြည့်နေရင်းနဲ့ အတုနဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေ အစီအရီ ခေါင်းထဲဝင်လာပြန်ပါလေရော………………..။
အတု အတု အတု လူတွေဘာကြောင့် အတုလုပ်ကြသလဲ? ဘာလို့ အတုကိုသုံးစွဲနေကြသလဲ ? တစ်ချို့များဆိုရင် အတုကို ခုံခုံမင်မ်ငကို သုံးစွဲနေကြတာ …..။ အဲဒိတော့ နေ၀န်းနီ တွေးနေတယ် တွေးနေတယ်….။ ရေးချင်တဲ့ကဗျာ မရေးဖြစ်သေးဘူး….။ တွေးလို့ကောင်းတုန်း….။
“ မိတ်ဆွေအတု -အပျော်ဖတ်ဝတ္ထု
တဲ့…။ မန္တလေးက ကဗျာရေးဖော် ကိုအောင်ဂျမ်းက သူရဲ့ “ 35 လမ်း ပလက်ဖောင်းပေါ်က ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်း” မှာ အဲဒိလိုသီကျူးသွားတယ်….။ အပျော်ဖတ်ဝတ္ထုနဲ့ မိတ်ဆွေအတု ထပ်တူပြုတင်စားပြီး သူက ကြက်မွှေးတစ်ချောင်းနဲ့ သန့်စင်မလို့တဲ့လေ……….။ 1986 လောက်က ရေးခဲ့တာမို့ရယ်….။ ခုဆိုကြက်မွှေးတစ်ချောင်းနဲ့ မလုံလောက်လို့ ဘူဒိုဇာနဲ့ ဖြိုခွဲမယ်လို့များပြောမလားမသိ….။ လောကမှာ ရှိသမျှ အတုတွေ ထဲမှာ သတိထားစရာအကောင်းဆု့း ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးက မိတ်ဆွေအတုပါ………။ ဒါကိုအပျော်ဝတ္ထုနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းလိုက်တော့ ဘယ်လောက်လှသွားတဲ့စကားလုံးဖြစ်သွားသလဲ တွေးကြည့်လေ လှလေ…….။ နေ၀န်းနီအထင်ပြောတာပါ…။ သဘောမတူတော့လည်းဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ …..။ ဟုတ်ဘူးလား….။ အတု အတု အတု နေ၀န်းနီ လူ့ဘ၀မှာ ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ အတုက လူအတုပါ….။ အဲ…ရှုပ်သွားသလားမသိဘူး….။ ခြောက်တန်းလောက်ကပါ….။ သူငယ်ချင်းနဲ့ ကျောင်းပြေးရင် လယ်ဝေး ဖောင်တော်ချက်မ ဘုရားကြီးဘက်ရောက်သွားတယ်…။ အဲဒိတုန်းက လယ်ဝေးမှာနေတာပါ….။ ကျောင်းကလည်း အထက တစ်ကျောင်းပဲရှိသေးတာ….။ နေရာက ဖောင်တော်ချက်မ ဘုရားကြီးရဲ့ အရှေ့တောင်လောက် ကျမယ်…။ လယ်ဝေးသားတွေကတော့ ဘုရားကြီးလို့ပဲ အလွယ်ခေါ်တာပေါ့….။ နေ၀န်းနီတို့ က ခြောက်တန်းလောက်ကတည်းကျောင်းပြေးတတ်တယ်….။ လွယ်လွယ်ကူကူ ကျောင်းသွားရင်း ဘုရားကြီးထဲဝင်နေလိုက်ယုံပဲလေ….။ အဲဒိမှာ ဆေးလိပ်ခိုးသောက် ငါးခိုးမျှာတဲ့ကောင်တွေဆီက မိုက်ကြေးခွဲ…..။ အဲဒိမှာ အခြောက်ဆိုတာ ပထမဆုံးကြားဖူးတာ….။ သူငယ်ချင်းကပြောတယ်လေ….။ ငါးလာခိုးမျှားတဲ့အထဲက တစ်ယောက်က အခြောက်တဲ့…။ အဲဒိတော့ နေ၀န်းနီတို့ ဘုရားစောင်းတန်းတစ်ခုမှာထိုင်ရင် အခြောက်အကြောင်း ပြောဖြစ်ကြတယ်လေ…..။ ခြောက်တန်းကျောင်းသား တစ်ယောက်ရဲ့ အသိနဲ့ပြောတာဆိုတော့ သ်ိပ်တော့စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းဘူးပေါ့ ….။ အဲဒိကစပြီး မိန်းမ အတု ရှိတယ်ဆိုတာ နားလည်ခဲ့ရဖူးတယ်…..။ နောက်တော့ ဟိုအတု ဒီအတုတွေကြားမှာ ကျင်လည်မျောပါခဲ့ရတာပေါ့လေ……….။ ရှိစေတော့ ဘာတွေကို ဘယ်သူတွေကတုတု အစစ်ဟာ အစစ်ပါပဲ လို့ …..။ အတုတွေပေါ်လာလို့ အစစ်က တန်ဘိုးကျမသွားတဲ့အပြင် တန်ဘိုးပိုကြီးလာတာလဲမြင်ရတာပဲ….။ ဆိုတော့ကာ အခြားအရာတွေအတုလုပ်တာက တော်ပါသေးရဲ့ တစ်ကယ့် မတုပ သင့်တဲ့အရာ လောကမှာ နှစ်ခုမရှိသင့်တဲ့အရာ ကို လိုက်ပြီး ပုံစံတူလုပ်နေတာက ခွင့်လွှတ်လို့ရမှာလား….။ ခွင့်ကောခွင့်လွှတ်သင့်သလား….။ တွေးရင်းတွေးရင်းနဲ့ နေ၀န်းနီ ရှက်နေတယ်…။ အဲဒိအကြောင်းလေးကို နေ၀န်းနီ ကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ပြောပြလိုက်ရရင် ကဗျာကတော့ လှပါရဲ့ …။ ရွာထဲမှာထိရောက်အောင် ထိုးဖောက်မရေးနိုင်တာက ဆိုးတယ်…။
ကဗျာအဖြစ်လည်း..တွေ့ ချင်ပါသေးတယ် ။
တော်တော် ခံစားစီးမျောလို့ ကောင်းမယ့်စာသားမြစ်တစ်စင်း..စီးဆင်းလှည့်ပါ…
( ဂဇက်မှာ မတင်ဖြစ်ရင်တောင်..ရေးပြီး..ပြခန်းအတွက်.. ပို့ ပေးရင်.. သိပ်ကောင်းမှာ.. ။
ြုပီးမှ ပြခန်းမှာ ပြန်တင်မယ်လေ ။ ။ )
ကျုပ်ကတော့ ဘာလုပ်လုပ် အစစ်ပဲ လုပ်တယ် ။ မတတ်နိုင်ရင် မလုပ်ဘူး
အတုတွေပေါ်လာလို့ အစစ်က တန်ဘိုးကျမသွားတဲ့အပြင် တန်ဘိုးပိုကြီးလာတာလဲမြင်ရတာပဲ….။
ပြောင်းပြန်တွေးကြည့်တော့ အတုတွေ ပေါ်လာလို့ အစစ်တွေ တန်ဖိုးပိုတက်သွား တယ် လို့ မြင်နိုင်ပေရဲ့ …။
ဟုတ်ကဲ့ အစစ်-အစစ်ချင်း အတူတူတောင် နာက အတုအလုပ်ခံရတဲ့ အစစ် နိက သိပ်မကျော်ကြားလို့
အတုမထွက်တဲ့ အစစ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ ..။
ဟို မင်းသားလူပျက် ..အဲ့လေ လူပြက်တွေ ပြက်သလို … လမ်းဘေးခိုးကူးသယ်လေးက ခညားအခွေတော့
ခိုးမကူးဘာဘူးတဲ့ ..ဘာလို့လဲ လေးစားလို့လား ကြိုက်လို့ ချန်ထားတာလား မေးတော့ ..
ကျုပ်ဗန်းလေးလို့ တဲ့ … တိန် ..သေဟဲ့နိန္ဒိယ ..။
ဗုဒ္ဓဂယာ အစစ် ဆိုတာ မြန်မာပြည်အခြေအနေနဲ့ဆို လူလတ်တန်းစားနဲ့ အထက် အလွှာတွေသာ သွားနိုင်မယ့်
နေရာပါ… တနှစ်တနှစ် အဲ့သည့်ခရီးနဲ့ အဲ့သည့်တိုင်းပြည်ဘက် ကို စီးဝင်နေတဲ့ ပိုက်ပိုက်တွေ မနည်းဘူး
ဆိုတော့ လူလတ်တန်းစားအောက် (အခြေခံလူတန်းစားအနေနဲ့) စရိတ်စက မတတ်နိုင်မယ့်လူတွေအတွက်
ဗုဒ္ဓဂယာ အစစ် ဆိုတာ ဒီလိုပုံစံပါလား ဒီလို mood ပါလား ဆိုတာ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ခံစားပြီး
ကြည်ညိုသဒ္ဒါပွားနိုင်ရင် … အစိုးရလည်း ၀င်ငွေရ-လူတွေလည်း ကုသိုလ်ရ နဲ့ win-win ပေါ့ဗျာ..။
(အဆိုးမြင်ကြည့်ရင်တော့ ဆင်းရဲသား အိပ်ကပ် အစိုးရနှိုက်ပြန်သည်ပေါ့ဗျာ..)
စရိတ်စကတင်မဟုတ်ဘူးဗျ အချိန် နဲ့ အကွာအဝေး မပေးနိုင်သူတွေ
(ဥပမာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ) အတုကိုသွားပြီး အစစ်ဆီရောက်သွားသလို
ကြည်ညိုသဒ္ဒါစိတ် ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒါလုပ်တာကို ကြိုဆိုရမှာပါဗျို့…။
ပြောမယ့်သာပြောတာနော… ဘယ်ဘုရားဆင်းတုတော် ကများ အစစ်ဖြစ်လို့တုန်း..
အကုန်လုံး သက်တော်ထင်ရှား မြတ်ဘုရားကို ပုံစံမှန်းပြီး ထုလုပ်ထားတာချည်း
မဟုတ်လား..။ ရှိခိုးတဲ့လူကလည်း ဒါကိုပဲ ရည်မှန်းပြီး ရှိခိုးတာပဲမဟုတ်လားဗျာ..။
ဆိုတော့ ..အတုနဲ့ မကင်းတဲ့ လောကမှာ အတုတွေလည်း အတုအတိုင်းအတာ
တိန်. ကဗျာဆြာ ကျုပ်ကိုလိုက်ရိုက်ပမယ်ဗျာ.
သူ့အတွေးက ကဗျာဆန်တဲ့အတွေး. ကျုပ်ရဲ့မတူတဲ့အမြင် က
အတုတခုပေါ်ကနေ. ဖန်တီးသူ ခံစားသုံးစွဲသူ ဝင်း ဝင်း ဖြစ်စေမယ့်
ရုပ်ဝါဒီအတွေးပါ. အော်ရီချင်ဒယ် အတွေးတော့မဟုတ်ဘူးခည.
ပြောပြပါ့မယ်ဗျာ. ဂလို. အိမ်နဲ့ တနာရီ လောက် ကား/ရထား
စီးပြီးသွားရင်ရောက်တဲ့ နေရာမှာ Little world ဆိုတာရှိသဗျ.
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေက အဆောက်အဦ တွေ ဝတ်စုံ တွေ ကို တနိုင်ငံ ကို တိုက်ကလေး
လေးငါးလုံးစာလောက်အနှီတိုင်းပြည်တွေက ဆောက်လုပ်နည်းအတိုင်း ပုံစံတူ ခင်းကျင်းပြသထားသပေါ့ ကျုပ်တို့ဆီက တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ အကြီးစားပေါ့ဗျာ
တီလုပ် ကကြီး ယိုးဒယား ပြင်သစ် ဂျာမနီ အီတာလီ တောင်အာဖရိက ပီရူး ဘာညာသာဒကာပေါ့ဗျာ. လုပ်ထားတာ လုပ်ထားတာ
အဲ့သည့်မှာ ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်တွေကထွက်တဲ့ သေးသေးဖွဲဖွဲပစ္စည်းတွေ ရောင်းတယ်
ဝိုင်တို့ဘာတို့လိုပေါ့. ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်တွေက ဝတ်စုံတွေအငှားဝတ်ပီးဒါ့ပုံရိုက်လို့
ရတယ်. အတွဲတွေ လာသပေါ့. အဲ့ မိသားစုတေထေလည်း လာသဗျ. လာဆို
ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်တွေရဲ့ သိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေကို. ရေးထားဖော်ပြထားပေးတော့
မိဘတွေက ကိုယ့်သားသမီးတွေ ဖတ်စာအုပ်ထဲကမဟုတ်ဘဲ တင် အဲ့တိုင်းပြည်အကြောင်း လေ့လာသိရှိနိုင်အောင် နဲ့ အပမ်းဖြေ သဘောမျိုး
ခေါ်လာကြ လေ့လာစေကြတာ ခည. ဖတ်စာအုပ်မသုံးတဲ့ ပညာရေး.
ဆြာသမားတွေကလည်း တော်ကြတယ်. Stamp gallery လုပ်ပေးထားတယ်လေ.
ရွာတိုင်းကနေရာတိုင်းမှာ stamp ထုရမယ့်နေရာထားပေးထားတယ်.
အဲ့. ဘယ်လိုစုံရင် ဘယ်လို လက်ဆောင်ပေးမယ် (ပေါပေါပဲပဲပါ) လုပ်ထားတော့
ကလေးတွေက အားကျိုးမာန်တက်ပေါ့ဗျာ စုံအောင်စေ့အောင် ဒိုးကြသပေါ့
(အာဟိ stamp ထုရမယ့် အကွက်ပါတဲ့ စာအုပ်လေးတွေကတော့ ရောင်းတာပါ.
အနှီစာအုပ်ဈေးက စုံအောင်သွားနိုင်လို့ လက်ဆောင်ပြန်ရမယ့် ဝက်ဝံရုပ် ဈေးလောက်ခည. သွပ်သွပ်).
မားကတ္တင်းတတ်တော့ပြောပါတယ်. ကျုပ်လည်း ဈေးလိမ်ရောင်းတယ် ခံစားရတဲ့
ခရီးမို့ အစပိုင်းကချဉ်သကွာ ဆိုပြီးမသွားခဲ့ဘု
နောက်ပိုင်းမှ. အနီးအပါးကမှမကဘု အတော်ဝေးတဲ့နေရာတွေက အသိတွေပါ
အားလပ်ရက်ဆို တခုတ်တရ လာကြရတာ တွေ့တော့ တခုခုတော့ ထူးခြားမှာပဲ
ဟုတ်ကဲ့ အစစ်ကိုမရောက်ဖူးသော်ငြား အစစ်ရဲ့ မုဒ် ကို ဖီလင်ကို ခံစားနားလည်
နိုင်အောင် အားထုတ်ထားတော့ ပိုက်ဆံပေးရတာ ပေးပျော်တယ်လို့ကို
ခံစားရတဲ့ နေရာပါဗျာ. ကျုပ်တော့ ပန်ချာပီလို ဝတ်ပြီး ဒါ့ပုံ ရိုက်လာသေး
နောက်ထပ် လစ်တဲလ်ဝါးလ် တခုကတော့ နစ်ကိုးဆိုတဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ ရှိသဗျ
တကယ်ကကျုပ်အဲ့သည့်ကိုအရင်ရောက်ခဲ့ဖူးတာပါ. သူကတော့ တကယ့်အပြင်မှာ
ရှိတဲ့အရာတွေရဲ့ ၅၀၀ ချိုး၁ချိုးဆိုလား တည်ဆောက်ပြထားလို့ နာမည်ကြီးတာပါ
(လူရုပ်ဆို လက်မလောက်ရှိမယ့်အချိုးပေါ့ဗျာ). အဲ့သည့်ကိုရောက်တုန်းက
အမေရိကား ဆိုလို့ ဝင်ကြည့်မိပါတယ်. အိမ်ဖြူတော်ပုံစံတူတွေ့သဗျ.
သမ္မတ မိသားစု လို့ထင်ရတဲ့ လူ လေးငါးယောက် လက်ပြနေတာတွေ့တယ်
ငလက်မလေးတွေ နည်းနည်းလှမ်းတာနဲ့ ၂၀၀ မမ ဇွမ်းလန်းစ်နဲ့ ဆွဲပြီး ရိုက်ကြည့်ပါတယ်
လားလား. မဲမဲသည်းသည်းလေးဒွေ. ဆိုလိုချင်တာ အိုဘားမား သမ္မတဖြစ်တာ
ရက်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်. ကျုပ်ရောက်သွားတော့ ငလက်မလေးတွေကို update လုပ်ပြီး
စာရေးသူအဘနီ စိုးရိမ်တာလည်း သည်အပိုင်းပဲဖစ်ပါလိမ့်မယ်.
အတုလုပ်တာ လုပ်ပါ ကောင်းအောင်လုပ်ပေါ့. သေချာလုပ်ပေါ့
ဒါမှ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆားဗစ်ပေးနိုင်မှာပေါ့. နောက်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်သော
မိန်တိန်းနန့်စစ် နဲ့ အပ္ပဒိတ်လုပ်ပေါ့. မလုပ်နိုင်ရင်တော့ အလကားပဲ. အတုလုပ်တာ
ရောင်းတတ်ရင် ရောင်းလို့ရတာတွေ လုပ်စားလို့ရမယ့် လုပ်ငန်းတွေ
အများကြီးပါ. အိမ်ကနေစက်ဘီး နာရီဝက် စီးရင် စပိန်ရွာ ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ပါတယ်.
သဘောတရားကတော့ အထက်ကအတိုင်းပါပဲ. သို့သော်လမ်းမှာ ကျနော်ဖြတ်ခဲ့ရတာ
ဂျုံ မုန်လာ နဲ့ မုန်ညင်း စိုက်ခင်းတွေ ဗျ. ဆိုတော့ သည်မြေကို မုန်ညင်းစိုက်စားမလား
အထက်ကလို ဧည့်ခေါ်ငွေရှာ လုပ်ငန်း ကိုလုပ်မလား(တကယ်တမ်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့ဗျာ) ဆိုတာကတော့
စီမံကိန်းဆြာတွေ စဉ်းစားကြဖို့ပါ. ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်မှတော့ မုန်ညင်းစိုက်စား
နေတာကမှအကောင်း နော့. (အတွင်းစကား နေပူတော်မှာ ပင်ဂွင်း ဘယ်နှကောင် မာလကီးယားသွားပြီးပြီ ဆိုလားးး). အာဟိ
အထူးသဖြင့်..နေပြည်တော် နဲ့ ရွှေတိဂုံ ဘုရားအတု ကို လုံးလုံးသဘောမကျပါ..
“သတိထားစရာအကောင်းဆု့း ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးက မိတ်ဆွေအတုပါ”
တရုတ်ပြည်ကြီးမှာဆိုရင် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ၇ပါးကိုတောင်ပုံစံတူအတုလုပ်ပြထားတော့
သူ့နိုင်ငံသားတွေ ကမ္ဘာအနှံ့မပတ်နိုင်ပေမဲ့ အံ့ဘွယ်ကြီးတွေတွေ့ဖူးခံစားဖူးရတာပေါ့ဗျာ…
“အတုတွေပေါ်လာလို့ အစစ်က တန်ဘိုးကျမသွားတဲ့အပြင် တန်ဘိုးပိုကြီးလာတာလဲမြင်ရတာပဲ…´´ ဆိုပေသိ အတုကြောင့် တစ်ခါတရံမှာ အစစ်သည် တုန်လှုပ်တတ်ခြင်း မှေးမှိန်တတ်ခြင်း စိုးရွံတတ်ခြင်း တို့ ဖြစ်တတ်ချေ၏။
အတုနဲ့ အစစ် အကြောင်းပြောရရင် တစ်ထောင့် တစ်ည ပုံပြင်ထက်ရှည်သွားလိမ့်မယ်…..။ လောကမှာ နှစ်ခုမရှိသင့်တဲ့အရာကို ကဗျာဆရာက ကဗျာရေးဖို့တွေးမိတာပါ….။ ကဗျာနဲ့ပြရင် တစ်ချို့နေရာတွေက တိုက်ရိုက်ပြောလို့မရ လို့ သွယ်ဝိုက်ပြီး ဖွက်ပြီးပြောရင် သဘောမပေါက်မှာစိုးလို့ ကဗျာရေးမဲ့အကြောင်းလေး အချိန်မီ ပြောကြည့်တာ ကျုပ်တို့ ဗမာတွေက ဘာသာရေး တံဆိပ် ကပ်လိုက်ရင် တို့ထိရဲတဲ့သူက ခပ်ရှားရှားရယ်
အာမီရမ် အတုလည်း ဒီလိုပဲ
ကျနော် ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ကဗျာတွေထဲမှာ ကိုနေဝန်းနီ ကဗျာတွေ ရှေ့ဆုံးကပါ။
ကျန်တဲ့ အတုတွေအကြောင်းတော့ မပြောတော့ပါဘူး။
ကျနော်ကတော့ မိတ်ဆွေတု ထက် ရန်သူစစ်ကို ပိုလိုချင်ရဲ့ဗျာ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ရန်သူတွေ များများလာတာပါပဲ။
ကေဇက်ရယ် ဆရာအောင်ချိမ့် ရေးဖူးတယ်လေ….။ လောကမှာ သိပ်မလိုချင်ပါဘူးတဲ့ လောဘသိပ်မကြီးဘူးပေါ့ ….။ သူလိုချင်တာက မိတ်ဆွေစစ်စစ်နဲ့ ရန်သူစစ်စစ် ဒီနှစ်မျိုးကိုပဲ လိုချင်တယ်တဲ့ အဲကဗျာလေး ပြန်ရှာကြည့်ဦးမယ် ….။ အလက်ဆင်းတို့ ကဗျာပြခန်းကိုပို့လို့ရရင်ပို့လိုက်မယ်….။ သူတို့က ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တဲ့ ဆရာကြီးတွေရဲ့ ကဗျာကိုကော ပြခန်းထဲချိတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိ မသိရသေးဘူး မေးကြည့်ပြီးချိတ်ပေးမယ်ဆိုရင် တို့လှမ်းပို့လိုက်ပါ့မယ်….။